I-Swordfish: iimpawu, indawo yokuhlala, ukutya kunye nokunye! | Ngeentlanzi
Mhlawumbi, xa ubhekisa kwihlabathi lasemanzini, iintlanzi zihlala zithi qatha engqondweni. Ewe, ezi zizilwanyana ezizezona zibalaseleyo zolu hlobo lwendawo yokuhlala, kwaye zichanekile ngenxa yeendlela zazo ezahlukeneyo, imibala, indlela yokuziphatha, njl. Alithandabuzeki elokuba kweli qela lezidalwa singalatha kwezininzi, kodwa mhlawumbi yenye yezona ntlanzi zibalaseleyo.
I-Swordfish ibikho ebomini bomntu ngezizathu ezininzi, ukusukela kwakudala ibisonwabisa. Nangona kunjalo, banokubaninzi kuni abangazaziyo izinto ezinkulu ngaye, kwaye esi sizathu sokuba senze eli nqaku. Apha, wena Siza kunika ulwazi olubanzi onokuthi uqhelane ngayo ne -fishfish emangalisayo.
1 Indawo yokuhlala yeSwordfish
2 Iimpawu eziphambili zentlanzi
3 Ukutya kweSwordfish
Indawo yokuhlala yeSwordfish
Kukho iimeko apho isilwanyana esikhetheke ngakumbi, kokukhona kunzima ngakumbi. Asinakho ukuhambisa lo mthetho kwi -fishfish.
Intlanzi yeswedi Kuwo onke amalwandle ehlabathini. Ewe ayizizo zonke iindawo ezihlanjwe ngamanzi olwandle onokuzithanda. Banokukhethwa kwangaphambili okunamandla uhlobo olufudumeleyo lwamanzi, ezinje nge tropical kunye ne subtropical. Ngokubanzi, zihamba kwiindawo ezikufutshane nomphezulu wobushushu, ojikeleza ijikeleze 15 ºC. Kwelinye icala, kuyinyani ukuba abahlali nje kuphela kule mimandla, kodwa kuye kwakho neziganeko, nangaphezulu kwesinye, apho babonwa khona emanzini abandayo, nangona sinyanzelisa ukuba ayisiyiyo ixhaphakileyo.
Ukuba sifuna ukuqhubeka nokucacisa kwaye sichaze ezona ndawo zixhaphakileyo ze -fishfish, olu luhlu lulandelayo luya kuza: emantla ePeru, emantla eHawaii, empuma yeJapan, nakwiindawo ezithile zaseMexico naseMelika.
Iimpawu eziphambili zentlanzi
Njengoko besitshilo ekuqaleni kweli nqaku, i-swordfish, egama layo linzululwazi Xiphias gladius, Yenye yezona ntlanzi zibalulekileyo kwezakha zakho. Imfihlo yale meko ilele kwisiteketiso sayo.
Umlomo omde nokhombe kule ntlanzi luphawu lwayo oluchazayo. Olu lwakhiwo lwamathambo lufana ncam nekrele lekrele elide, elisebenzisayo ukuhlasela ixhoba lalo kunye nokuzikhusela kwizilwanyana ezinokubakho.
Ngaphandle komlomo otyhafisayo, i-swordfish inomzimba omkhulu. Kwaye, ewe, xa sisithi mkhulu, mkhulu kakhulu. Iimpawu zifunyenwe eziye zafikelela kwi Iimitha ezi-5 ubude kwaye inobunzima obungaphezu kwesiqingatha setoni, phantse akukho nto! Lo mzimba uhlala uneetoni ezimnyama, phakathi kwazo imibala emnyama neblue ibonakala. Kufuneka kuqatshelwe ukuba xa kuziwa ekwakhiweni komzimba, abantu basetyhini bakhulu kakhulu kunamadoda.
Olunye uphawu lwefishfish kukuba sisilwanyana ectothermicOko kukuthi, okwaziyo ukugcina ubushushu bomzimba wakho kuluhlu oluphezulu kunolo lwamanzi apho ifunyenwe khona.
Okokugqibela, khankanya ukuba ziintlanzi ezine- umbono omkhulu kwaye njengomgaqo jikelele, Ndedwa.
Ukuba nesixhobo esinamandla njengomlomo waso obukhali nongqalanga, uyayilungiselela imikhwa ye-swordfish ilungile. Ukuba ucinga njalo, uchanekile.
Ziyenye yeentlanzi ezinezakhono zokuzingela ezilungileyo kwihlabathi. Ngaphezu koko, akusekho kuxhomekeka kuphela kweso sixhobo esibeka ugxininiso olukhulu kuso, kodwa isantya kunye nokukhawuleza Ekuhambeni kwayo iyinika amandla amakhulu okutya.
Phakathi kweentlobo ngeentlobo zeentlobo ezinokuthi sizichonge njengezinto ezinokubakho njengexhoba le -fishfish zezinye iintlanzi ezinje nge-mackerel, ihake, ityhuna, njl. Kubo sinokongeza ezinye ii-crustaceans, ii-cephalopods, njl.
I-Swordfish zizilwanyana oviparous, eliguqulela ekuqanduseleni amaqanda. Inkqubo yokuchumisa yenzeka ngokusebenzisa indlela yokuchumisa yangaphandle (Abafazi bayawakhulula amaqanda emanzini, aya kuthi kamva adityaniswe lidlozi lendoda), kwaye kuyaphawuleka ukuba amadoda afikelela ekukhuleni ngokwesondo kwangaphambi kwabasetyhini.
Ukuzala kwamaqanda kwenzeka unyaka wonkeKe ngoko, i-swordfish ayinalo ixesha elithile lokuvelisa kwakhona, ukuba nje amanzi anamaqondo obushushu afanelekileyo. Iindawo ezikhethiweyo zihlala zilwandle lweCaribbean, amanxweme eFlorida kunye neGulf of Mexico.
Enye inyani, ngaphezulu kokufuna ukwazi, kukuba abantu ababhinqileyo abanakho ukugcina okungaphezulu kwaye akukho nto ingaphantsi kwayo Amaqanda ayi-1 ukuya kuma-29 ezigidi. Kuyinyani ukuba ubukhulu beentlanzi, amaqanda mancinci kakhulu, akaze abe makhulu kune Iimilimitha ezingama-2 ububanzi.
Siyathemba ukuba sikwazise kancinci malunga nekrele, ngelishwa liyehla ngenxa yenxalenye enkulu kwi ukuloba ngokungakhethiKuba yenye yeentlobo, inobukho obukhulu kwisondlo sabantu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Intlanzi yeswedi
Ndiyabulela kakhulu! Ndithandile!